Antananarivo sy Toamasina Miato ny fampianarana…
Minisitry ny fahasalamana “Zava-doza ny fanjifana fanafody eny an’elakelan-trano”
Tokony hiezaka ny mponina tsy hividy fanafody an’elakelan-trano intsony hoy ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka, Pr Julio Rakotonirina fa hanjifa izany eny amin’ireo toerana efa voaoakana nandritra ny fanokanana ny trano vaovaon’ny OPHAM tetsy Andohatapenaka omaly.
Aretina kitrotro Lasa olana maneran-tany
Tsy ny firenena afrikana izay sokajiana mahantra tahaka an’I Madagasikara intsony ankehitriny no malaza anjakan’ny aretina kitrotro fa hatramin’ireo firenena matanjaka tahaka an’i Lafrantsa sy Etazonia dia efa tratra avokoa araka
Araka ny fanambaran'ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena omaly, dia miato ny fampianarana amin'ireto toerana voalaza ireto amin'ity herinandro ity ho fanohizana ny fanadiovana ny sekoly (miankina sy tsy miankina):
Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, Toamasina I, Toamasina II. Amin'ny alatsinainy 9 oktobra izany ny ankizy vao miverina mamonjy ny toeram-pianarany any amin'ireo fari-piadidiam-pampianarana miisa 6 ireo. Manentana ireo sekoly tsy miankina ihany koa ny minisitera mba handraraka fanafody amin'ny sekoly mandritra io fotoana voalaza io.
Mazava ny resaka eto fa efa tena loza mihatra ny fihanaky ny pesta an-tanàn-dehibe ka tsy maintsy naato ny fampianarana mba isorohana ny mety ho fiparitahany izay hitera-doza avy eo. Nitsidika sy nanao fanentanana ho an’ny ady amin’ity valanaretina ity teny amin’ny sekolim-panjakana Ambohimiandra moa ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary sy ny solontenan’ny minisiteran’ny fahasalamana omaly. Natomboka teny amin’ny EPP sy ny CEG teny an-toerana ny fandrarahana ranom-panafody ho an’ireo sekoly miankina amin’ny fanjakana eto Antananarivo mba hiadiana amin’ny fihanaky ny pesta. Izay sekoly rehetra vita fanondrahana fanafody, dia hatsahatra mandritra ny 3 andro ny fampianarana mba hiasan’ny fanafody, ary mety tsy hahazaka ny herin’ny fanafody rahateo ny mpianatra, ka izay no nandraisana io fepetra io. Maharitra 6 volana kosa ny herin’ny fanafody. Ny CISCO Antananarivo Renivohitra sy Toamasina no tena hanamafisana io asa fanondrahana fanafody io. Ho an’ny sekoly tsy miankina rehetra, dia manatona ny DREN sy ny CISCO amin’ny toromarika ho azy ireo. Ny mpianatra ahitana trangana atody tarimo na mikohaka misy ra dia hoentina avy hatrany eny amin’ny tobim-pahasalamana. Tsy vahaolana ny fampiasana tapim-bava na ireny antsoina hoe: “cache bouche” ireny fa ny fahadiovana no vahaolana, raha ny fanehoan-keviny. Tsy ianao no voa fa iny fitaovana iny, dia mety hipetahan’ny otrikaretina ary mety hamindra amin’ny olona manodidina anao, ka tsy tokony hoentina miditra any an-trano na toeran-kafa be olona, fa dorana avy hatrany. Tsy ilaina ny fividianana sy fihinanana fanafody raha tsy voamarina fa voan’ny pesta satria mety tsy handaitra intsony ny fanafody amin’ny fotoana mety tena hahavoa, hoy hatrany ity minisitra ity. Manafatra amin’ny tokony hitandremana amin’ny vaovao samihafa ny minisitra Paul Rabary mba hisorohana ny fampisavorovoroana. Mifampiaro hatrany kosa ny ao anaty fitondrana momba ity zava-doza ity, ka nilaza i Paul Rabary, fa manao ny asany ara-dalàna ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Nahazo fanakianana maro ny minisitry ny fahasalamana, ary tsy vitsy ny fanehoan-kevitra maneho ny tokony hametrahany fialana satria tsy arakaraka ny fampandriana adrisa nataony ny zava-niseho satria nambarany fa voafehy ny pesta.